प्रधानमन्त्रीले भनेकाे द्रुत विकास खै त कहाँ छ ? - Birgunj Sanjalप्रधानमन्त्रीले भनेकाे द्रुत विकास खै त कहाँ छ ? - Birgunj Sanjalप्रधानमन्त्रीले भनेकाे द्रुत विकास खै त कहाँ छ ? - Birgunj Sanjal
प्रधानमन्त्रीले भनेकाे द्रुत विकास खै त कहाँ छ ?
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:५५
यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमात्रै आयोजनामा खर्च गर्न सकेका ओलीले विकास भएको भन्नु आफैंमा हास्यापद हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको, जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका, ऊर्जामा जनतालाई सेयर दिएको, पोखरा र लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनिरहेको, फास्ट ट्र्याकको काम द्रुतगतिमा भइरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको, सयौं ठाउँमा पुल बनिरहेको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै काम नगरेको भन्नु पूर्वाग्रहमात्र भएको आरोप लगाए। याे खबर आजकाे नागरिक दैनिकमा छ।